Drafitra hankafizanao ny fialantsasatra miaraka amin'ny ankizy | Vaovao momba ny dia
Mikasa ny hankafy ny fialantsasatra miaraka amin'ny ankizy
Efa maro ny olona mankafy ny fialan-tsasatrao ary maro hafa no hanomboka tsy ho ela. Betsaka ny fianakaviana no mandinika izay mety ho tetik'adin'izy ireo amin'ity fahavaratra ity. Fantatsika rehetra fa ny ankizy dia mety tsy liana amin'ny drafitra ho an'ny olon-dehibe, satria hitany fa mankaleo izy ireo, saingy misy zavatra maro sy toerana maro azontsika tsidihina miaraka amin'ny ankizy.
Manana hevitra vitsivitsy hatolotra anao izahay amin'ny fahavaratra. Hevitra ho an'ny fialantsasatra miaraka amin'ny ankizy, mba hahafahanareo rehetra miala voly sy mankafy izany fotoana fialantsasatra izany miaraka amin'ny orinasa. Betsaka ny drafitra azo tanterahina amin'ny fandehanan'ny ankizy, koa mariho izay rehetra azonao atao amin'ireo ankizy kely ao an-trano.
1 Ny valan-javaboary fialamboly
2 Ny valan-drano
3 Fitsidihana ara-kolontsaina ho an'ny rehetra
4 Traikefa amin'ny gasikara
5 Milalaova fanatanjahan-tena mandritra ny fahavaratra
6 Ankafizo ny fiainana eto amin'ny firenena
7 Ny morontsiraka dia kilasika
Ny valan-javaboary fialamboly
Raha misy zavatra tian'ny ankizy toy ny olon-kafa valan-javaboary fialamboly. Mety ho safidy tsara ho an'ny zokiolona koa io, satria any amin'ny valan-javaboary ankehitriny dia misy toerana ho an'ny sokajin-taona rehetra. Matetika misy faritra ho an'ny ankizy faralahy ary ny iray hafa ho an'ireo lehibe kokoa, izay azon'ny olon-dehibe atao koa. Misy ihany koa ireo faritra azo hanina sy fampisehoana, ka mandritra ny iray andro, fara fahakeliny, dia hataontsika rakotra zaridaina fialamboly mahafinaritra ho an'ny fianakaviana iray manontolo izany. Iray amin'ireo malaza indrindra ny tontolon'ny Disney, saingy misy zaridaina lohahevitra sy zaridaina fialamboly amin'ny toerana maro, koa raha mankany amin'ny toerana haleha isika dia afaka mitady iray eo akaiky eo foana.
Raha mankany amin'ny toerana misy ny tsara ny toetrandroAzo antoka fa hahita zaridainan'ny rano eo akaiky eo isika, toy ny any amin'ny Nosy Canary. Misy ny karazany rehetra amin'izy ireo, miaraka amin'ny manintona ny olon-dehibe koa ary izy ireo no safidy tsara indrindra hahafinaritra, mampiala voly ny ankizy ary milay amin'ny andro mafana. Satria manana karazana tolotra isan-karazany izy ireo dia hahatsapa ho mahazo aina ireo fianakaviana ao amin'ireo toerana ireo. Tokony hojerentsika foana ny taonan'ny ankizy mba hahafahan'izy ireo mankafy soa aman-tsara ny fisarihana miaraka amintsika.
Fitsidihana ara-kolontsaina ho an'ny rehetra
Fantatsika fa ny ankizy dia mety ho mankaleo be amin'ny tranombakoka feno zavakanto fahiny, saingy tsy tokony hiala amin'izany isika drafitra kolontsaina ho an'ny rehetra. Ny tranombakoka momba ny tantara voajanahary dia mety hahaliana ny ankizy, satria manana toerana ifandraisana maro izy ireo hahafahan'izy ireo mianatra zavatra koa. Fitsidihana ny tranon'ny tranom-bakoka izay ilazana tantara, zavatra izay afaka mampifaly azy ireo ihany koa. Tranombakoka maro ihany koa no manana zotram-pifandraisana natao manokana ho an'ny ankizy kely, ka ny zava-kanto dia hazavaina amin'izy ireo amin'ny fomba mahaliana azy ireo.
Traikefa amin'ny gasikara
Na dia olon-dehibe maro aza no mety ho gourmet, matetika ny ankizy dia manandrana zavatra ihany koa. Raha anisan'ireo ny zanakao manapa-kevitra ny hanandrana sakafo isan-karazany, drafitra tsara hampiofanana ny lanilaninao ity. Ny fahafinaretana traikefa gastronomika vaovao miaraka amin'ny fianakaviana dia mety ho hevitra lehibe. Ny fanandramana lovia vaovao sy ny zavatra tsy fantatsika dia mety hahaliana. Ny fandehanana eny an-tsena ihany koa ary gaga amin'ireo zava-baovao hitantsika ao aminy dia traikefa hafa ho an'ny ankizy kely.
Milalaova fanatanjahan-tena mandritra ny fahavaratra
Mavitrika tokoa ny ankizy, ka mila mieritreritra zavatra iray isika mba hahafahan'izy ireo mampiasa angovo. Betsaka ny hetsika azo atao na eny amoron-dranomasina na eny an-tendrombohitra. Koa satria fitsangatsanganana amin'ny fianakaviana hankafy ny làlan'ny kayak mahafinaritra, na ny mitaingin-tsoavaly na ny tsipika zip. Mazava ho azy fa mazava ho azy miaraka amin'ny fanaraha-mason'ny matihanina sy ny fiheverana ny taonan'ny zaza.
Ankafizo ny fiainana eto amin'ny firenena
Hevitra tsara ho an'ny ankizy izany miaina amin'ny tontolo an-tanàn-dehibe hatrany izy ireo. Fonenana any ambanivohitra no ahafahan'izy ireo mankafy fiainana hafa tanteraka amin'ny fomba hafa. Misy toeram-piompiana ahafahan'izy ireo mianatra mikarakara biby, mifandray amin'ny natiora ary mianatra ankoatra ny fahafinaretana. Izy io dia traikefa manankarena ho an'ny fianakaviana iray manontolo ary ny ankizy dia hanana zavatra betsaka holazaina rehefa mahita ny namany any am-pianarana indray.
Ny morontsiraka dia kilasika
Fantatsika rehetra izany ny kilasika lehibe amin'ny fahavaratra rehetra hampialana voly ny fianakaviana manontolo. Ny morontsiraka iray dia mahafinaritra sy mampiala voly ho an'ny rehetra ary mamela antsika hankafy ny toetr'andro tsara, indrindra raha mankany amin'ny toerana mafana be isika. Ny hevitra tsara indrindra hiarahana amin'ny ankizy dia ny misafidy tora-pasika misy rano marivo sy tsy misy onja, ahafahan'izy ireo mandro soa aman-tsara. T amoron-dranomasina izay manana serivisy ampy koa, satria mila trano fidiovana sy toerana misy rano madio sy toerana fisakafoanana isika. Ireo morontsiraka ireo dia matetika hita amin'ny tontolo an-tanàn-dehibe ary tototry ny vatana, fa ho setrin'izany dia manana serivisy maro izy ireo, izay manamora ny zavatra ho antsika raha miaraka amin'ny ankizy isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Mikasa ny hankafy ny fialantsasatra miaraka amin'ny ankizy
Bargain hahafantarana an'i Prague sy Budapest: Avy amin'ny 378 euro, trano sy sidina